भोलिदेखि सबै बन्द ! (सूचनासहित) – Dainik Sangalo
October 18, 2020 718
काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका सबै अदालत बन्द भएका छन्। घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनु वाइ नहुने भएको हो।शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो जानकारी गराएको हो । सूचना अनुसार आजदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सर्वोच्च र मातहतका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछैन ।अदालतले हरेक वर्ष हिन्दुहरुको महान पर्व दसैंको अवसरमा घटस्थापना को दिनदेखि पूर्णिमासम्म अदालत बन्द गर्दै आएको छ ।बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइ भने टीकाको दिन र शनिबारबाहेक अन्य दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेससम्म हुने अदालतले जनाएको छ३० असोज, काठमाडौं । चार दिनअघि ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमि त एक वृद्धको मृ’त्यु भयो । सरकारी रेकर्डमा कोरोना संक्रमणकै कारण मृ’त्यु भएको उल्लेख भए पनि उनको वास्तविकता अलि फरक छ । कोरोनाको
रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अत्यधिक त्रासका कारण ‘स्ट्रोक’ भएर मृ’त्यु भएको परिवारजनले आशंका गरेका छन् ।काठमाडौंको खहरेमा घर भएका विष्णुनिरौ
ला ६६ वर्षको उमेरमा पनि निकै स्वस्थ र फुर्तिला थिए । कृषि विकास बैंकको जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि परिवारसँग दिन बिताइरहेका उनलाई कुनैदीर्घरोग नरहे को बुहारी निशा बताउँछिन् । कोरोनाको सामान्य लक्षण भए पनि गम्भीर अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । रिपोर्ट आउनुअघिसम्म बुवाको स्वास्थ्सुधार
न्मुख थियो, तर पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थाहा पाएपछि एकाएक ढल्नुभयो,उनले भनिन् ।परिवारमा हामी ६ जना छौं । २० दिनजति अगाडि मेरा श्रीमानलाई लगतार ज्वरो आएको थियो । कोरोनाको आशंकामा उहाँले पीसीआर परीक्षण गराउनुभयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यसपछि थप परीक्षण गराउँदा सुगरबढको र पिसाबमा इन्फेक्सन देखियो । औषधि खाएपछि करिब १० दिनमा उहाँ ठीक हुनुभयो ।यहीबीचमा म र मेरो डेढ वर्षको छोरालाई पनि ज्वरो आयो ।तरदुई–तीन दिनमा आफैं ठीक भयौं । हामीले पीसीआर परीक्षण गराएनौं ।बुवामा चाहिँ अघिल्लो बिहीबारबाट लक्षण देखिएको हो । सुरुमा रुघा लाग्यो । त्यस पछि ज्वरो आयो । खाना रुच्न छाड्यो । कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएपछि आइतबार सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा लगेउहाँकोपीसीआरपरीक्षण गरायौं ।भोलिपल्ट सोमबार पीसीआर रिपोर्ट लिन म आफैं गएँ । मैले रिपोर्ट लिएर घर आइपुग्दा बिहानको साढे १० जति बजेको थियो । कोरोनाको लक्षण देखिएपछि बुवा माथिल्लो तल्लाको एउटा कोठामा आइसोलेट भएर बस्नुभएको थियो । हामी तल्लो तलामा बसेका थियौं ।
Prevदुःखद खबर; अस्ट्रियामा एक नेपाली महिलाले आफ्नै ३ नाबालक सन्तानको ज्या’न लि’इन्!
Nextपा, पी महिला जसले अष्ट्रियामा गरिन आफ्नै3सन्तान को नि, र्म,म ह, त्या